Novorossiysk, Shirokaya Balka: Phumula
Leli pheshana ku Abrauskom nhlonhlo libizwa imishayo ububanzi. Kuyaziwa ukuthi umngcele zemvelo ngokuthi ezinye izindawo behlukene imvelo.
Mezhgore noma umhosha (noma ugongolo) kanye nobude 2.5 amakhilomitha eya shingle lolwandle, ehlukanisiwe lonke nhlonhlo ekhoneni olunamandla, Amzay futhi Breather, amila emithambekeni ukhuni okuxubile. Ngakho-ke, leli pheshana unendlela yawo, kwehlukene Novorossiysk nasezindaweni ezizungezile, microclimate.
resort yayisencane futhi iyinhle
Le ndawo imvelo okusikhumbuza elisogwini oluseningizimu ye-eCrimea neMedithera ngesikhathi esifanayo. uvumelanise Wide, okuyinto kahle emzaneni ezisemadolobheni, ebhishi amahle izitshalo amazing kanye nezilwane, kuyinto eziyinkimbinkimbi sibhedlela kwedolobha Novorossiysk. Ingabe lo ipharadesi 4 km kusuka emzaneni Myskhako, okuyinto lihunyushwa ezinhlamvini Adygei kusho "inhlonhlo esisuka olwandle" futhi 10 km kusuka hero-emzini Novorossiysk, umasipala elithize abengumsunguli. Area kungenziwa ngokuthi isihlobo, ngoba ugongolo lesibanti kungumhlahlandlela yokungcebeleka imfundo kunalokho enkulu - izinto 43, ezihlanganisa izindawo zokungcebeleka, amamotheli, amahhotela, futhi yebo, yonke ingqalasizinda ehambisana nalokho ekushoyo. Abantu bendawo ukuzivumelanisa emizini yabo sokuzilibazisa lula zabantu, eza ukuphumula "babeyizidlova".
Three lolwandle ( "Lukomorye", "Surf" futhi 1.5-ikhilomitha nude) axhunyiwe komunye ezivamile, okuyinto welula ukuze angu-3. imingcele zako ziyizindlela emithambekeni yezintaba: kuya enyakatho-ntshonalanga - Wizard, kusukela eningizimu - kulesi siqhingi. I ensungubezini avuke lolwandle ukuze Novorossiisk, ukuthi wanika igama edolobhaneni resort endaweni - ugongolo ububanzi. Mezhgore ewumngcingo ngempela, kodwa Emabalazweni ubizwa ngokuthi 'igebe "ezansi iqalisa emfuleni okuthiwa, okuyinto kunalokho ekusakazeni ububanzi 1 imitha. Ibizwa ngokuthi Chuhabl. Kuyinto intaba ephakeme endaweni ezungezile esigodini ugongolo ububanzi - breather (438.4 m). Umfula likhanyelwe ukusakaza abaningi, futhi bonke ndawonye bakha kudoti endaweni ingqikithi 20 sq. km.
izimpawu zendawo abahlukile
Soil sakhiwo yokuthi umswakamo nezimpande zezihlahla walondoloza isikhathi eside, ngakho emithambekeni embozwe luhlaza okotshani. Empeleni, umhosha iyathakazelisa is izimila yayo, ngoba kukhona izihlahla ukuthi awasenaso kuphi emhlabeni - ngokwesibonelo, Vitex engcwele, nguye isihlahla ezihlanzekile, kanye nabanye. Okubaluleke kakhulu, ugodo ububanzi enhle equable sezulu - ihlobo akuyona ashisayo, hhayi ebusika obubanda (wallflowers eziqhakaza). Yilokho sezulu esipholile inikeza induduzo ongenakuqhathaniswa - air lokushisa ngoJulayi kuyinto degrees 28, futhi amanzi - 27.
Konke lokhu kwaholela ekumisweni lapha sibhedlela eziyinkimbinkimbi "ugongolo ububanzi", ukuphumula kanye nokwelashwa okwakwenza suburban izindlu izindlu e Novorossiisk resort sikahulumeni. Ulwandle efudumele ecacile, amabhishi pebbly, izintaba ezembethe amahlathi - konke lokhu esingokwemvelo ezindaweni eziningi ngasogwini Black Sea. I microclimate ipheshana - yilokho okwenza le ndawo resort esiyingqayizivele zezulu, abadumile (kufakwe irejista efanele) kusukela 1908.
Izitekhi zasemizaneni lesiGreki abavubukuli bathola loMfula i-umhosha, ziqinisekisa ukwaziswa komlando ukuthi lezi zindawo kusukela ekupheleni BC VI ekhulwini kuya IV BC. e. Sindika beniyingxenye isimo, bese, engu-480 BC. e, -. embusweni we Bosporus. Ngakho, ngo-1898 ngasesinqeni "Intaba Spring" (lapho izwe kwakungekaNkulunkulu zomninindawo Kuleshevich) kwatholakala ngokudayisa ithusi lazo umzukulu Mithridates Elikhulu, Bosporan Queen dynamis (agcinwe Hermitage). Kamuva, ezweni lidlule isuka kwesinye isandla iye; Nazi iminonjana inqaba Genoese. Phakathi nempi kula masimu babe izimpi osindayo Malaya Zemlya.
Izinyathelo zokuqala ebhekiswe ukuzilibazisa ophucukile
Kakade kusukela 1969, nge kusungulwa zezulu zokungcebeleka kuqala impilo, ugongolo ububanzi, ukuphumula kanye nokwelashwa lapho amaphayona kweqiniso Kuhlolwe, izindawo zokungcebeleka izikhungo Wellness iqala ngenkuthalo yakhiwe. Futhi kule minyaka yamuva, lapha njengakwezinye izindawo, olunzulu ukwakhiwa - sashintshwa yashayisa unqenqema, buyekeza noma ukwakha izakhiwo ezintsha ingqalasizinda resort. Ngenxa yalokho, lapho Novorossiysk, Shirokaya Balka futhi yonke indawo kancane kancane siguqulelwa izindawo uyakufanelekela kakhulu ukuvakashela, neze kunabayeni Sea ezindaweni zokungcebeleka nalamanye emave.
ezibalulekile Ikakhulukazi kulezi zindawo isizini velvet, ngoba ngisho ngo-Okthoba, ngenyanga lokushisa lamanzi ingaphezu 19 degrees. Ngo ugodo ezibanzi njalo aminyene, ngoba lapha ungathola iholidi ukuze ivumelane zonke ukunambitheka - futhi abathandi lokuzijabulisa kwamasiko, futhi abalandeli uthule futhi ukuphumula ucabangisisa. Ngemva 2002, yayakhiwe ngayingcwelisa yesonto St U-Alexis.
Kumila ezibanzi ugongolo
Njengoba kuphawulwe ngenhla, endaweni enkulu sibhedlela afanayo Novorossiysk ugongolo ububanzi unendima ekhethekile. On insimu yalo kunezinhlobo ezingaphezu kuka-40 enguqulweni yolwazi kanye namakhaya iholide. The njalo kunazo ekhonjiwe futhi saxoxa zihlanganisa "Chernomor", "Metroklub", "seagull", "Ocean" futhi "Ihlathi Fairy Tale". Etholakala lapha phakathi nendawo yokungcebeleka nokuzijabulisa "Wide Beam" isizinda "Surf" idume iqiniso ukuthi ngeka ebhishi, okungadingi uthole ngaphandle ngokusebenzisa database uqobo. Ezitebhisini okuholela ebhishi, esemgwaqweni ngaphansi kwewa mayelana 40 amamitha eliphezulu futhi has izinyathelo 203 nezindawo ezimbili ukuphumula. Someone like it, umuntu - neze (ngesisekelo khona okubhukuda), futhi engu-ehloniphekile wakhe. Kodwa nge base "Surf" ebhishi 20 ububanzi futhi 800 eside, umkhathi enkulu yamanzi emva kwakhe sihle njalo, ikakhulukazi lapho phosphorescent ulwandle.
Ngaphambi kwalokhu lolwandle kusukela yomnyango Myskhako sigodi edolobheni - "lolwandle Lwalugobile", okuyinto ikakhulukazi aguqulelwe imisebenzi zezingane. Libuye igama elifanayo kanye ekamu. Ibhishi omkhulu, sikuhlomele ngokuphelele, futhi insimu yalo enkulu (ubude - ngaphezu ikhilomitha, ububanzi - 30 metres) ogwini kunemidlalo eminingi ezikhangayo amanzi. Inikeza konke kuhlanganise yokupaka, kukhona ematendeni nezindawo ukudla. Futhi ngenhla it is asanda kwakhiwa ezimhlophe idolobha ukuvakasha isitayela sasendulo saseRoma, nokunye-ke, njengenjwayelo, kukhona imigoqo, izindawo zokudla, izitolo, yabagibeli ehlukahlukene zonke-konke kuyadingeka ukuze abe yesimanje ngokuvakashela, yokungcebeleka Black Sea.
"We-seagull" - ngowokuqala eyakhelwe ngqo at the zendawo lolwandle, ukuzilibazisa. uvumelanise Wide ke, ngo-1969, wamukela izivakashi zayo zokuqala - abasebenzi Novorossiysk Avtokombinata owayehamba lapha nge emzaneni Myskhako. Ubunzima yokungena kule ndawo enhle eyenziwe ngo-1975 ngemizamo ngokuhlanganyela kamasipala ukwakha umgwaqo ngamatshe lapha, yokungcebeleka weza ukuvelela.
Ngaphandle zonke izinzuzo ngenhla kwendawo, kukhona esinye isici ekhangayo - echibini angenasawoti Abrau, enkulu kunazo zonke kulesi sifunda. Izinganekwane ngaye iphelele nesithi Yiqiniso, ehambisana ne-uthando enqobayo (Abrau - igama intombazane), kodwa konke lokhu kungatholakala, yenza okukodwa izinkambo eqhutshwa njalo ugodo ububanzi. Lokhu resort ubhekwa osemusha, ngoba kukhona izakhiwo kancane ubudala futhi yisikhathi, ngoba zakhukhuleka ngozamcolo ngo-2002. Lapho isakhiwo esisha bathunjelwa akhawunti impumelelo kanye nezinselelo isikhathi ngamancozuncozu, okuyinto ikakhulukazi uyakwazisa kwentsha. Ezezindlu ezizimele, njengoba e yolwazi eminingi, ungakwazi umyalelo ngaphandle labalamuli, futhi lokhu kwenza amanani abasakwazi kufinyeleleke futhi yeningi. Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona ugongolo ububanzi 2014 wahlangana njengenye yezindawo avakashelwa njalo.
Bangaki amakhilomitha kusuka eMoscow kuya Kiev? Yinde kangakanani leyo uhambo?